Finland: Jaaliyad Taageertay Madaxwyne Cabdi – Rasaasa News
Helsinki, Feb 18, – Waxaa dalka Filnad shir ku qabtay, qayb ka mid ah Jaaliyada ka soo jeeda gabalka Ogaden, kuwaas oo sheegay in ay taageersan yihiin Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI], madaxwayne Cabdi iyo ururka horumarinta degaanka Somalida Itoobiya.
Jaaliyadan oo ah tii ugu dambaysay oo taageerta Madaxwayne Cabdi iyo maamulkiisa, ayaan sheegin sababta keentay in ay xiligan taageeraan. Madaxwayne Cabdi ayaa doorasho gali doona sanad ah ka dib, lamana saadaalin karo in uu ku soo noqon doono xafiiska maamulka iyo in kale.
Taageerada xiligan ka imanaysa Jaaliyadaha qaarkood, ayaa loo malaynayaa in ay qayb ka tahay tima-tuurasho doorashada ka dhici doonta Itoobiya, gaar ahaana Ismaamulka Somalida Itobiya.
Wax kasta oo ay sameeyaan dadka ku jira Ismaamulka Somalida Itoobiya [ISI], Jaaliyaadka dibada iyo gudaha, lama filayo in ay wax saamayn ah ku yeelan doonaan cida imanaysa hogaanka Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI].
Jaaliyada Finland oo muddadii afarta sano ahayd ee madaxwayne Cabdi uu hogaaminayey Ismaamulka Somalida Itobiya aan shanqar laga maqal, waxa xiligan kiciyey waa hal arin oo ah, hunguri wado gogol xaadhkii.
Qurba joogta Ismaamulka Somalida Itobiya [Ogaden], waa kuwii garnaqsan lahaa maanta, ee ma aha kuwii lugayn lahaa dadwaynaha Somalida Itobiya [Ogaden].